Iraisam-pirenena-Dalana, ny Fitaterana-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Our Services>Ny fitaterana làlana iraisam-pirenena>Ny fitaterana làlana iraisam-pirenena
Sohologistics, manaraka hatrany ny fomba fitantanana ny "Fampivoarana sy fanavaozana, Fivoarana sy fanitsiana, natambatra niaraka tamin'ny taona nahitana traikefa be tamin'ny fitaterana làlana sinoa sy ny traikefa an-dàlam-bahoaka, nifanaraka tamin'ny fivoaran'ny lalana Silk sy Eurasian. ny fehikibo ara-toekarena kaontinanta, dia mamaly mavitrika an'i China "One Belt And One Road" hetsika "andrefana" andrefana "sy stratejika stratejika fampiroboroboana ao ASEAN, hanamboatra amin'ny fomba tsara ny drafitry ny tetikady amin'ny taona 2010 ary manomboka manome andiany vaovao fitaterana làlana iraisam-pirenena:
Avy any China ka hatrany amin'ny Centerial Asian dimy dia i （Kazakhstan 、 Kyrghyzstan 、 Uzbekistan 、 Tajikistan sy Turkmenistan), manerana ny kaontinanta rosiana, mankany Mongolia sns indrindra ho an'ny
cargos out-of-gauge, cargos lozisialy ary cargos mavesatra.
Nandritra ny ezaka efa an-taonany maro, ny SHL dia nanangona traikefa manankarena ary nanangana fiaraha-miasa be amin'ny fihenam-bidy.
SOHOLOGISTICS RAVALOMANANA RANO FIVAVAHANA HO ANY SADOLONY
Làlana lehibe any Sina
Faritra Autonomous an'i Mongolia ao anatiny
Ampidiro aloha ny fahalalana momba ny fitaterana làlana iraisam-pirenena:
1.IRU no fandaminana fitaterana làlana eran'izao tontolo izao.
Izy ireo dia mitarika vahaolana hanampiana an'izao tontolo izao mandroso tsaratsara kokoa, hanohanana ny varotra, ny fitomboana ara-toekarena, ny asa, ny fiarovana, ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina. Ny asan'ny IRU dia misy firenena 100 mahery. Ny ivon-kevitray dia ny fikambanana fitateram-pitateram-pirenena sy mpandraharaha fitaterana.
2.Hanao ahoana ny momba ny volavolan-dalàna mifehy ny fitaterana làlana iraisam-pirenena?
● Ny alàlana CMR navoakan'ny sendika iraisam-pirenena momba ny fitaterana làlana.
● Fifanarahana arak'asa ho an'ny fifanarahana iraisam-pirenena amin'ny Marchandises par Route (fohy ho an'ny CMR) dia eken'ny ankamaroan'ny firenena afovoany, Eropeana, ASEAN ary firenena hafa CIS. Ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny cargos, ny shipper, consignee, carrier izay mitovy amin'ny volavolan-dalàna fakana entana.
3.Inona ny fomba fanonganana ny fitaterana làlana iraisam-pirenena?
● Mampiasa ny fahazoan-dàlana TIR, izany hoe ny Transport International Router.
● TIR (Transport International Router) dia rafitra iraisam-pirenena fitaterana entana sy fiantohana iraisam-pirenena.
● Araka ny fitsipi-pifehezana ， mamela ny entana alefa any amin'ny firenena niaviany, amin'ny alàlan'ny firenena fitaterana, ho any amin'ny toerana iray ahatongavana any amina fehizoro voafehy izay fehezin'ny fomba amam-panao amin'ny alàlan'ny rafitra multilateral, mitovy hevitra tsy misy fizahana, tsy adidy , na tsy tahiry mandritra ny fitaterana. Io no fomba tsotra indrindra, azo antoka sy azo itokisana indrindra hamindrana entana manerana ireo sisintany iraisampirenena marobe, mitahiry fotoana sy vola ho an'ireo mpandraharaha sy ny manampahefana mahazatra.
4. Taiza no nanomboka nanatanteraka ny fivoriambe TIR?
TIR dia manana firenena mihoatra ny 70 manerana izao tontolo izao, ary mitombo haingana izany miaraka amin'ny firenena 20 mahery manantena ny hiditra ho faritra izay faritra manan-danja eo amin'ny fehiloha ara-toekarena. Saingy tsy nanatanteraka an-tsakany sy an-davany ny fivoriambe hatramin'ny 25 jona 2019, izay nanokatra ny fiampitana sisintany 1,200 rehetra i Shina. Rehefa nanatanteraka tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriambe TIR tamin'ny voalohany tamin'ny volana Mey 2018 i Shina, dia ny fitaterana làlana miampita sisin-tany eo anelanelan'i Shina sy firenena amin'ny alàlan'ny "Belt And One Nahatratra haavo vaovao ny lalana ", ka lasa fantsona logistika fahefatra hifaninana amin'ny alàlan'ny mari-dranomasina, ny rivotra ary ny lalamby efa misy.
Izany dia hanome ny doka vaovao hanokafana bebe kokoa an'i Shina, indrindra ho an'ny fampidirana lalina ao amin'ny faritra aty an-toerana mankany amin'ny fifandraisana "One Belt And One Road" ary hanatsarana ny fifanakalozana ara-toekarena sy varotra amin'ireo firenena sy firenena mifanila amin'ny fehikibo sy lalana.